Tian’ny Mpitarika Fitondrana Miaramila Ao Thailandy Hovalian’ny Olom-pirenena Ireo Fanontaniana Efatra Momba Ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2017 15:15 GMT
Mandrisika ny olom-pirenena mba hitsidika ny foiben'ny governemanta ny Praiminisitra Prayut Chan-o-Cha ao Thailandy ary hamaly ireo fanontaniana efatra momba ny fifidianana izay mety hamaritra ny hoavin'ny firenena.
Prayut no lehiben'ny tafika, izay nitarika ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014. Nampanantena izy fa hamerina ny fitondrana sivily ny miaramila raha vao tafapetraka ny fanavaozana ara-politika sy ara-pifidianana. Nisy ny lalàm-panorenana nankatoavina tamin'ny taona 2016 izay nitarika ny fototra hanatontosàna fifidianana saingy voatsikera be izany lalàmpanorenena izany noho izy ahitana fehezan-dalàna nanome fahefana midadasika ho an'ny miaramila eo amin'ny asam-birao.
Ireto ambany ireto ireo fanontaniana efatra notanisain'i Prayut:
Foibe eo ho eo amin'ny 1000 manerana ny firenena no nisokatra mba handraisana ireo valinteny avy amin'ny vahoaka. Mihevitra hanao fanadihadiana eny amin'ny toeram-pivarotana lehibe ihany koa ny governemanta mba hahazo olona maro kokoa.
Naneho ny ahiahiny momba ny tena antony manosika an'i Prayut nanao fanadihadiana tsy mahazatra tamin'ny hevi-bahoaka ireo mpitarika antoko politika. Manahy izy ireo fa mety handambolambo ny vahoaka manoloana ny hevitra fitondrana miaramila nitarina ao amin'ny firenena i Prayut. Saingy nanizingizina ireo mpanohana an'i Prayut fa liana fotsiny ahafantatra ny fomba fijerin'ny olom-pirenena ny mpitarika ny fitondrana miaramila, fa tsy te hiraharaha ny feo mafin'ireo mpanao politika mpanohitra.
Misalasala momba ny fitokisana ny fanadihadiana i Sunai Phasuk, mpikaroka zokiny ao amin'ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona ao Azia:
Nangataka tamin'ireo vondrona mpikatroka ny tranonkalam-baovao tsy miankina Prachatai mba hitanisa izay fanontanian'izy ireo lehibe manokana hovalian'i Prayut. Nampahatsiahy an'i Prayut ny Hetsika E-saan Vaovao fa manakana ny demaokrasia ny fanonganam-panjakana:
I also have 4 questions for Prayuth. #Juntaland#Thailand#Prayuth#NCPO#coup#pressfreedompic.twitter.com/TycuU3ppxO